Akụkọ - igodo na-apụ apụ na igodo ime
Anyị niile maara na igodo ụgbọ ala na-arụ ọrụ dị mkpa mgbe ụgbọ ala chọrọ ịgba ọsọ n'okporo ụzọ. Ya mere, igodo ụgbọ ala dị ezigbo mkpa maka ụgbọ ala ahụ. Ọ bụrụhaala na enyi nwere ụgbọ ala n’ezinaụlọ nwere igodo ụgbọ ala, ma ị bụ ụgbọ eletrik, ụgbọ ala ma ọ bụ ọbụlagodi, enwere ọtụtụ igodo dị iche iche anyị na-ahụ, ụdị igodo ọ bụla Ha niile nwere agwa ha, na usoro na igwe anyị na-aga n’ụlọ ahịa akpọchi dị iche. Ya mere, olee ihe dị iche na ha? Ka anyị bido site na usoro mmepụta nke mkpọchi mkpọchi (ọ bụrụ na enwere ụkpụrụ nke mkpọchi ụgbọ ala Ọ bụrụ na ị ghọtaghị, ana m akwado ka ị gụọ isiokwu na-esonụ: Mkpokọta mkpọchi mkpọchi nke mkpọchi ụgbọ ala). Anyị maara na mkpọchi ndị mkpọchi dị iche iche mepụtara na-eme ka igodo ahụ nwee ụdị atọ: igwe egweri, egwe ọka mpụga, na ime ụlọ. Typesdị atọ a bụ Emebere ya site na njikọta ihe eji emechi mkpọchi. Tupu nke a, m ga-ekwupụta echiche maka onye ọ bụla, ya bụ, egwu isi, kedu akara igodo, ọ na-ezo aka nchikota nke isi ọrụ ọrụ nke igodo ahụ etinyere na mkpọchi mkpọchi.
Automobile n'ibu isi nhazi ọkwa
Mbụ: Ewepụghị egwe ọka otu track
Ewepụghị-egwe ọka single-track key na-ezo aka ewepụghị egwe ọka isi na naanị otu track na-arụ ọrụ. (PS: Ọ bụrụ na egwu abụọ dị na igodo ahụ ma ọ bụrụhaala na otu egwu na-arụ ọrụ, a na-akpọ ya track flat) Na-emekarị, igodo maka obere ụgbọ ala eletriki, oche drawer, na mkpọchi kabinet bụ ụdị igodo a, dị ka ndị a Foto dị na-egosi:
Car n'ibu isi nhazi ọkwa, ụgbọ ala isi nhazi ọkwa foto
Nke abụọ: mbadamba nkume na-egweri egwu abụọ
Uzo igweru uzo abuo na-ezo aka na igwe ihe di larịị nke egwu abuo igwa ya na-aru oru n’otu oge. N'ozuzu, ụdị mkpọchi igodo a na-ahụkarị na ọgba tum tum, gwongworo, gwongworo, gwongworo, Buick Excelle, Kia K2, Toyota Vios, ọtụtụ ụgbọ ala nke Nissan, na ọtụtụ ụgbọ ala ụlọ n'okpuru 100,000 yuan bụ ụdị igodo a. , Dị ka e gosiri n'okpuru:
Nke atọ: igwe na-egweri egwu abụọ
Ihe dị n'ime igwe milling abuo na-egosi na ụzọ ụzọ abụọ nke igodo na-arụ ọrụ n'ime ya, ụzọ traktị ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ. Ohaneze, ụdị igodo a na-eji obere mma eletriki igwe eletriki, C-larịị mkpọ cylinders nke mgbochi na-ezu ohi ụzọ, na ọtụtụ nke Volkswagen, Audi, na BMW mkpọchi bụ igodo nke ụdị mkpọchi. E gosipụtara eserese dị na foto na-esonụ:
Nke anọ: Na-egwu egwu n'ime ụzọ
Esịtidem-egwe ọka anọ track ụzọ na-ezo aka esịtidem-egwe ọka isi nke anọ niile track nke esịtidem-egwe ọka na-arụ ọrụ. N'ozuzu, ụdị igodo a na-ahụkarị na Toyota Crown, na ụfọdụ ụgbọ ala ọgbara ọhụrụ, Lexus, wdg. Bụ ụdị isi a, egosiri igodo ahụ na ọnụ ọgụgụ ndị a: